နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ Mother Industrial Co.,Ltd. သို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာ | Ministry Of Information
နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ Mother Industrial Co.,Ltd. သို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာ
နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်၊ တိုင်းမှူး၊ မြို့တော်ဝန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ Mother Industrial Co.,Ltd. စက်ရုံသို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုသည်။
ဦးစွာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် Mother Industrial Co.,Ltd. သို့ ရောက်ရှိကြပြီး စက်ရုံအစည်းအဝေးခန်းမတွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ချာလီသန်းက အမှတ်(၂) အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ အုတ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ(တညင်းကုန်း) ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည့် အခြေအနေများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုနည်းပါးသည့် အပေါ့စားသဲကွန်ကရစ်တုံး ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စက်ရုံပိုင်မြေနေရာကို Mother Industrial Co.,Ltd. သို့ နှစ်ရှည်ငှားရမ်း ခဲ့သည့် အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြ သည်။
ထို့နောက် Mother Industrial Co.,Ltd. မှ Managing Director ဦးစိုးရီက စက်ရုံတည်ဆောက်မှု သမိုင်းအကျဉ်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်နိုင်သည့် အပေါ့စား သဲကွန်ကရစ်တုံး(Autoclaved Aerated Concrete Block-AAC)နှင့် ဖိအားမြင့်ခံ ကွန်ကရစ်တုံး(Autoclaved Pressed Concrete Block-APC) ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံအား ရင်းနှီးမြုပ်နှံဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အခြေအနေ၊ ကုန်ကြမ်းစုဆောင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း စဉ်များ၊ AAC နှင့် APC ကွန်ကရစ်တုံးများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ နှင့် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များအား နိုင်ငံတော်မှ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြရာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ်က စက်ရုံများအားငှားရမ်းစဉ် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ တွဲဖက်ထားသည့် ဝန်ထမ်းများသည် စည်းကမ်းနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၌ လိုက်ပါဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စက်ရုံများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ငှားရမ်းထားသည့် လုပ်ငန်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်မှုကော်မရှင် MIC ၏အတည်ပြုချက်နှင့် ခွင့်ပြုချက်များ ရယူရန်လိုအပ် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားပုဂ္ဂလိကပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးပါကြောင်း၊ စက်ရုံများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ပြီး အောင်မြင်မှုရရှိအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား စေလိုကြောင်းဖြင့် တိုက်တွန်းမှာကြားပြီး လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ယင်းနောက် စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်ထားရှိသည့် AAC နှင့် APC ကွန်ကရစ်တုံးများ၏ ခံနိုင်ရည် စွမ်းရည်၊ အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ စမ်းသပ်ပြသထားရှိမှုအား ကြည့်ရှုလေ့လာရာ Managing Director ဦးစိုးရီ ကလိုက်လံ ရှင်းလင်းပြသသည်။
ဆက်လက်ပြီး နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် Mother Industrial Co.,Ltd. စက်ရုံအတွင်း AAC နှင့် APC ကွန်ကရစ်တုံးများ ထုတ်လုပ်မှု အဆင့်ဆင့်နှင့် Physical Laboratory နှင့် Chemical Laboratory တို့အတွင်း အရည်အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာကြရာ Mother Industrial Co.,Ltd. ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြတ်၊ Managing Director ဦးစိုးရီနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်းပြသ ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်တော်တွင် တည်ထားပူဇော်မည့် “မာရဝိဇယ” ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး၏ ရတနာပလ္လင်တော်အပိုင်း(၁) တည်ထားပူဇော်ခြင်း မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြည်သူလူထုသို့ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း(မှော်ဘီ) ဘွဲ့ရအမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈) စစ်လက်ရုံးရွေးချယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်စိစစ်ရွေးချယ်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ အမှတ်(၃) သံမဏိစက်ရုံ(ရွာမ)နှင့် ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်းစိန်)၊ ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)၊ အသည်းရောင်အသားဝါ(ဘီ) ကာကွယ် ဆေးစက်ရုံတို့အား သွားရောက်စစ်ဆေး
နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံအမှာစကား ပြောကြား